avy amin'ny admin tamin'ny 21-09-06
Toetran'ny indostria Tamin'ny 2021, nitombo intelo farafahakeliny ny vidin'ny bisikileta elektrika. Izany no bcz amin'ny vidin'ny vy efa lehibe ary koa fitaovana hafa. Tsy marin-toerana ny tsena ary koa ny toedran-dranomasina. Ny Tianjin Shengtai International Trade Co., L ...
Ny fifaninanana amin'ny bisikileta an-dalambe dia ny taranja fanatanjahan-tena amin'ny bisikileta amin'ny bisikilety, tanterahina amin'ny arabe vita. Ny hazakazaka amoron-dalana no endrika malaza indrindra amin'ny hazakazaka bisikileta, amin'ny isan'ny mpifaninana, hetsika ary mpijery. Ny endrika roa mifaninana indrindra amin'ny fifaninanana dia ny fanombohana ...
tamin'ny admin tamin'ny 20-07-09
Ny 12 febroary no taom-baovao sinoa, ny orinasan-tsika dia hanana fialantsasatra iray volana, ka mandritra izany ny famokarana tsy harindra. Ka hitatra araka izany ny fotoana fandefasana. Azafady mba alamino araka ny antonony ny fotoana hividianana entana hisorohana ny olana tsy voafehy. Raha ny zava-niainan'ny p ...